Imicroscope yeWifi, iMicroscope yeVidiyo, iMicroscope yeZilwanyana-iOpto-Edu
Ukulungisa ifowuni ephathekayo, imicroscope yesitiriyo sesona sixhobo siluncedo. Ngoku sineemodeli ezintsha ze-A23.3645N-R kunye nephedi yerabha, ikhamera yedijithali, isikrini seLCD sonke sidityanelwe ukusebenza ngokulula! I-A36.4952 yimodeli enamandla ngakumbi enescreen esikhulu se-1080p, iqhosha lokujonga ekugxilwe kulo kunye nokukhanya kwendandatho ye-LED ukujonga zonke iintlobo zenjongo ngokusondeza ilensi kwiscreen!
Imicroscope eguqulweyo, inguqulelo "eguqulweyo" yemicroscope ethe tye, zombini umthombo wokukhanya kunye nesikhuphisi esimiswe phezulu ngaphezulu kweqonga kwaye sikhombe eqongeni, ngelixa iinjongo kunye nenjongo ye-turret iphantsi kwenqanaba elalatha phezulu, Yayilwa ngo-1850 nguJ. Lawrence Smith, owayedla ngokujonga iiseli eziphilayo okanye izinto eziphantsi kwesitya se-petri okanye iflask yenkcubeko. Ii-microscopes eziguqulweyo zebhayoloji zinokubonelela ngombala oqaqambileyo, umahluko wesigaba, okanye imisebenzi ye-epi fluorescence nayo.
Imicroscope yestereo sisixhobo esifanelekileyo ukujonga nokujonga idayimani, ubucwebe, ngoku, kunye nescree yedijithali eyenzelwe yonke into enye kunye nomthombo wokukhanya kwe-LED, i-A36.3601 kunye ne-A36.1210 zaba namandla ngakumbi kwaye zaba lula ngakumbi kumthengi wethu, ofuna ukubona ngokucacileyo ngaphakathi kwidayimane!
I-OPTO-EDU (Beijing) Co .. Ltd. igxile ekuthengisweni kwezixhobo eziphezulu ze-optical kunye nezixhobo zemfundo ukusukela ngo-2005. Njengomnye wabathengisi abathengisa imveliso e-China nabanamandla amakhulu eTshayina, sijolise kule ndawo ngaphezulu kweminyaka eli-16. I-OPTO-EDU iye yanikwa ukusekwa kwesiseko sedatha esipheleleyo seOptical & Educational isixhobo esenziwe eTshayina, esijolise ekubeni sibonelele ngokwenyani sibonelela ngento enye kwimicroscope nakwizinto zemfundo. Okwangoku, sineemodeli ezingaphezu kwe-5000 + kunye nabavelisi abaqeqeshiweyo abangama-500 + kwinkqubo yethu yokubonelela. Ukusuka kwezona mveliso zenqanaba lokuqala zokungena kwezona zisombululo ziingcali, sihlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi abahlukeneyo kwezonyango, kuphando lwezenzululwazi, kwezemfundo, kumzi mveliso, kwezolimo nakwimizi mveliso eyahlukeneyo yonke imihla.
A16.1095 ezipheleleyo ezihamba Inverted ezibengezelayo Mi ...
Imoto ngemicroscope, LCD T ...
Imicroscope yeFluorescent eguqulweyo, iSemi -...
Imicroscope ye-Fluorescent ye-LED eguqulweyo, i-B ...
Isigaba seBiological Biological Phase Contrast Cont ...
A13.1090 Iguqulwe Metallurgical iMicroscope, Sem ...